माधव नेपाल भन्छन "बा-मालेबाट एमाले बनेपछि मुलुकको सबै कुरा ठिकठाक हुन्छ"
माधव नेपाल भन्छन “बा-मालेबाट एमाले बनेपछि मुलुकको सबै कुरा ठिकठाक हुन्छ”
काठमाडौं। पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले केपी ओलीलाई नेकपा एमालेको अध्यक्षबाट हटाइदिएपछि देशका सबैजसो समस्या समाधान हुने बताएका छन् ।
प्राइम टाइम टेलिभिजनबाट हिजो राति प्रसारित ‘जनता जान्न चाहन्छन्’ कार्यक्रमका लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नेता नेपालले भने, “नेपालका लागि केपी ओली निकै घाँडो भएका छन् ।
उनी परिवर्तनविरोधी, व्यवस्थाविरोधी र संविधान र संसद् विरोधी हुन् । त्यसैले हामीले ओलीलाई अध्यक्षबाट मात्र होइन, सदस्यबाट पनि निकालेका थियौं ।
उनले हामीलाई अवैध भनेर फूर्ति गर्ने ? उनको दम्भ र अहंकारले विनाशतर्फ लान्छ । बामालेबाट एमाले बनोस्, सबै ठिकठाक हुन्छ ।”
एमसीसीका कारण ५ दलीय गठबन्धनमा दरार नआउने दाबी पनि उनले गरे । उनले थपे, “गठबन्धन केपी ओलीको बा पार्टी हो र टायँ टायँ फिस हुने ? दक्षिणपन्थी र प्रतिगामी शक्तिका कारण वामलोकतान्त्रिक गठबन्धन बनेको हो ।
हामीलाई हतारमा बोल्ने, फुर्सदमा पछुताउने अवसर छैन । अमेरिकाले एमसीसीलाई आर्थिक सहयोग मात्र भनेको छ । त्यसको अविश्वास गर्ने कुरा होइन । तर प्रमुख कुरा जनता र पार्टी पंक्तिले पनि विश्वास गर्नुपर्यो नि । गठबन्धनप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता कायमै छ ।”
एमसीसीमा ५, ७ बुँदामा स्पष्ट हुन बाँकी रहेको पनि उनले औंल्याए । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले भने, “५५ अर्ब त्यति ठूलो पैसा होइन । निजगढ विमानस्थल बनाउन नै १ खर्बभन्दा बढी पैसा चाहिन्न्छ ।
एमसीसीका बारेमा ५-७ इस्यूमा क्लियरिफिकेसन चाहिन्छ । सैन्य गठबन्धन हो कि होइन ? सैन्य रणनीतिको साझेदार बन्नुपर्ने हो कि होइन ? सार्वभौमिकता जोखिममा पर्छ कि पर्दैन ? रोजगारीको अधिकार नेपालीले पाउँछन् कि पाउँदैन । यी तमाम प्रश्नमा एमसीसीको स्पष्ट जवाफ आएपछि यसबारे छलफल चलाउनुपर्छ ।”
उनले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आएको महाभियोग प्रस्तावका कारण स्थानीय तहको निर्वाचन नसर्ने पनि बताए । उनले भने, “स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै हुन्छ । वैशाख ३० मा हुन्छ । यसमा कुनै दुबिधा छैन ।”
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने उनले औंल्याए । नेता नेपालले भने, “काठमाडौं विमानस्थलले १५ लाख पर्यटक थाम्न सकेको छैन । ५० लाख, १ करोड पर्यटक आउने हो भने थेग्न सक्छ ? निजगढमा विमानस्थल बनाउने क्रममा रुख काट्दा पर्यावरणमा असर गर्छ भनेर हल्ला चलाइएको छ ।
माधव नेपालको नाम चम्किन्छ भनेर कतिपय तत्व डराएका छन् । नक्कली र हावादारी कुरा गरेर रोक्ने षड्यन्त्र गरिरहेका छन् । म निजगढलाई आइडियल विमानस्थल बनाउने भनेर २०५१ देखि लागेको हुँ ।”
अर्को प्रसंगमा उनले पर्यटन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको आँटको प्रशंसा पनि गरे । उनले थपे, “प्रेम आलेले आँट देखाउनुभएको छ, राम्रो काम गर्नुभएको छ । आँटसँगै विनम्र पनि हुनुपर्छ ।”